Dhageyso:- Laftagareen oo soo bandhigay caqabadaha heysta Maamulkiisa | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:- Laftagareen oo soo bandhigay caqabadaha heysta Maamulkiisa
Dhageyso:- Laftagareen oo soo bandhigay caqabadaha heysta Maamulkiisa
Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftaagreen) ayaa sheegay in Mamaulkiisa uu caqabada koowaad ee heysta uu kala kulmay Ururka Al-Shabaab.
Waxaa uu sheegay in degaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan Koonfur Galbeed ay Al-Shabaab go’doomiyeen, isla markaana degmooyinka qaar aan la isugu gudbi Karin.
Waxaa uu hadalkiisa intaasi uu ku daray in Afar kamid ah degmooyinka Koonfur soomaaliya JBM ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab, sidoo kalena weli caqabado amni darro ay ku hayaan degmooyinka koonfur Soomaaliya JBM.
Sidoo kale waxaa uu sheegay Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftaagreen) in ay waajib tahay in siwadajir ah looga howlgallo in la isku furo wadooyinka degaannada iyo degmooyinka Maamulka Koonfur Soomaaliya JBM.
Hadalka Cabdi Casiis Xasan Maxamed (laftaagreen) ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Al-Shabaab ay mararka qaar dilal qorsheysan, qaarxyo iyo weeraro ay ka fuliyaan degmooyin ka tirsan Saddexda gobo lee Koonfur Soomaaliya JBM.
Previous articleKhalad Khalad Ma lagu Sixi Karaa?
Next articleMuxuu yahay Ujeedka Kulamada Sheikh Shariif ka wado Baydhabo & Xog laga helay?